Umhla My Pet » Impress Umhla – Nxiba for Success
ukubuyekezwa: UCanzibe. 30 2020 | 3 min ukufunda
Uvuka ithuba lesibini ukuba babe nesimilo esihle kuqala. Yinyaniso ukuba abantu uninzi ngephanyazo, badla enjini, izigwebo ngobuntu othile esekelwe imizuzwana embalwa yokuqala yokuhlangana yabo yokuqala. Ngenxa yale nto, kubaluleke gqitha ukuba bakhangele kwaye banxibe kangangoko xa intlanganiso ngomhla wokuqala. iinqwemesha efanelekileyo, nokuzilungisa olungileyo, kunye nesimbo Isiqhelo ngokwenene kubethelela umntu ngomhla wokuqala, kwaye ibe zizo make-okanye-ikhefu ngokuphathelele indlela onokuziva ngayo ngomhla wesibini. Nazi ezinye iingcebiso kuncedisa kungcono xa uzama ukuzithandisa.
Funda Jonga Best lakho
Ukuba awunalo nemvo egalelwe kwesimbo, kusenokufuneka benze kancinci uphando ukuze ufumanise ukuba ziintoni izinto ekhangeleka Best Fit uhlobo umzimba wakho, ibala lobuso, nobuntu. Indlela elungileyo ukuze ufumanise ukuba yeyiphi imibala khangela engcono kuwe ukuba wenze uhlalutyo umbala. Tyelela yokuzivavanya ezaziwayo okanye salon ukuba unako ukwenza uhlalutyo umbala kuwe uze ufumanise ukuba yeyiphi imibala akusebenzela ngcono kugqitywa yethu. Ngokusekelwe kuhlalutyo, siphume siye kuthenga ezinye nezinxibo asebenza ngaphakathi ludweliso umbala ehambelanayo.
Enye indlela ukuze ufumanise ukuba ziintoni nezinxibo, iinto zokuzilungisa, nokhetho fashion kubukeka phezu kwakho ukugcina iitshomi zakho, usapho, kunye nabo bathi ngawe. Ukuba umhlobo wakho osenyongweni uqhubeka kokuthetha ukhangela ukuba kulungile xa ndinxibe umbala othile, bhala ukuba banxibe ukuba umbala ngomhla wakho. Ukuba co-abasebenzi ndekele malunga iinwele yakho entsha okanye impahla, ke umqondiso kulungile ukuba iinwele okanye Unxibe na ogudileyo phezu kwakho kwaye uya kuba ukhetho elungileyo ngomhla wokuqala.
Unako kwakhona umhlobo ukuba ucinge ukuba ezinamagama ngaphandle ezivenkileni nani umhla isinxibo sakho. Ukuze abe ngumbono omhle ukuba bafunde amaphephancwadi fashion ukugcina phezulu-ukuya-kumhla iintsingiselo iingubo ukuthandana onokuthenga kwiingcebiso. Qinisekisa ukuba unxibe isinxibo yakho entsha, ukuphuma esidlangalaleni ngaphambi kokuba uye ngomhla ukuze ubone ukuba uhlobo awasabela ufumana noontanga bakho. Musa ekufuniseleni into kraca entsha ngomhla wakho kuqala.
Yiba ngokungangqalanga – Okungaphantsi kuninzi
Musa ukuzibaxa xa lilungele umhla wakho. Sonke sifuna khangela okusemandleni ethu, kodwa luvo kungakwenza ukuba uhambe kancinci kude kakhulu yakho make-up, iimpahla, okanye ivumba. khumbula, ezingaqondakaliyo make-up, esigxininisa iimpawu enu zobuso inokuchukumisa ngaphezu uzama ukufihla iimpazamo zakho enzima abumba kunye yokuqaba eliqaqambileyo okanye ndidanile.
Kwakhona kubalulekile ukuya ukutyabeka izincedisi impahla nezacholo. namajikazi Nice, iwotshi eyinzwana, okanye yomqala Kuchwayitwe kunokusinceda ukugxininisa ubuhle umntu kunye nesimbo, kodwa imixokelelwane zegolide enzima, emakhonkcweni zonke ngomnwe, nezacholo ingundaba ndingekawuboni phazamisa umhla ingaboni ubuhle bakho bemvelo.
Xa enxibe Khmer okanye isiqholo, musa ndikunyakamisa ukucaphuka ivumba yakho! Ukuze uphephe engengozwilakhe ivumba bakho, kutshiza Khmer okanye isiqhumiso phambi kwakho phambi ukuzenzisa ke ndingena yokutshiza. Oku kuya kunika uthsuphe ayelele ivumba ngaphandle livumba ngobubhovubhovu.
Ukuthandana Fashion Dos zenziwe Khumbula Soloko
Nazi iincam fashion kufuneka usoloko ulandela xa uza kuba ngomhla:
1. kuba uhlambulukile, izandla kakuhle manicured, iinwele zobuso kakuhle abanembeko, kwaye zinwele ecocekileyo.
2. Nxiba iingubo ukuba womelele bamthomalalisa nawe, ukuphepha nantoni kakhulu -shwa (oko kukwenza khangela nqatha okanye frumpy) uhlale kude nantoni ziyakuqinisa okanye ezinqanda.
3. Nxiba ngokufanelekileyo esi sihlandlo, bahlale kude ezincotsheni itanki neembadada (nokuba ke isimbo oqhele) ukuba wena kunye nomhla wakho bayaya umxhesho iqela
Kwaye apha ezinye izinto kufuneka bakuphephe xa ndiwubopha kubethelela ngomhla wokuqala:
1. Musa unxibe izihlangu ezintsha kraca okanye impahla ukuba bangakhululekanga ibindim njengoko olutsha zinako ukuba ubuhlungu ngokwenene iinyawo zenu ukuba abaziswanga badlabhuka kakuhle kwaye, ukuba ngamaxesha ngokulungelanisa iqhina lakho okanye ikhola kuba bangakhululekanga isuti, uya ungalucima umhla wakho.
2. Kuphephe enzima make-up nezinxibo sisiphango, arholwe kude ngubani kuwe ngenene kwaye ubuhle bakho bemvelo.
3. Musa ukuzama kuba shonini kakhulu; ukuze nibe nako ukutsala oko. Ukuba ufuna ukwenza umfuniselo Jonga yakho, kuyenza phambi komhla uze ufumane ingxelo ukuba noba okanye hayi inkangeleko isebenza wena.